June 2021 - MinSayYar
ယနေ့ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာ အကျဉ်းထောင်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်တဲ့ မေတိုးခိုင်
အနုပညာရှင်တွေ အများစုကတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အပြည့်အဝရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ် ။ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်တွေ ကျော်ကြားမှုတွေကို မေ့ကာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း လမ်းမပေါ်အထိထွက်ကာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ ။ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကနေလည်း အစွမ်းကုန်နေ့ရောညပါ soeak out တွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒါ့ကြာင့်လည်း ပုဒ်မ (၅၀၅-က) နဲ့ တရားစွဲဆိုခံရသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဆို ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြပါတယ် ။ ဒီမနက်အစောပိုင်းလောက်မှာတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအပြင် အခြား နိုင်ငံရေးသမားများကို လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် ။ အားလုံးကလည်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေခဲ့ကြသလို တစ်ချို့ဆို လွှတ်ပေးမယ့် နာမည်စာရင်းတွေပါ ကြိုသိနေကြသလို ပိုတောင် […]
30.6.2021 ရက်နေမှာတော့ မြန်မာစစ်သူပုန်လုပ်ရပ်တွေကို ရသည့်နည်းလမ်းနဲ့ ရပ်တန့်ပြစ်ကြဖို့ NUG အစိုးရ Drဆာဆာ မြန်မာအထူးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့နှင့် ပြင်သစ်အထက်လွတ်တော်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကာ ကွယ်ရေးနှင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တို့သည် ပြင်သစ်ပါလီမန်နှင့် လက်နက်ကိုင်ကာကွယ်ရေး ကော်မတီတွင်… ပူပေါင်းလို့ ဆွေးနွေးသွားကြတော့မည်တဲ့ ပြစ်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လွှတ်တော် ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနှင့် မြန်မာအစိုးရ(NUG)သာမကပဲ ထူး ရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရော ပါနေတာကတော့ ဘာအရေးလည်း ဘာလုပ်ကြတော့မှာလည်းဆိုတာ ရိပ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်က UNရဲ့ မြန်မာပြည်အတွက်… အထူးကိုယ်စားလှယ်ရှာရနာဘာဂနာဟာ US ရဲ့မြန်မာအရေးကို ဘိုင်ဒန်ကိုတင်ပြလို့ ကွန်ထိုးပေးနိုင်တဲ့ ဒုဝန်ကြီးတို့ဟာ တွေ့ဆုံပြီး UN မြန်မာအထူးကိုယ်စား လှယ်က မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်သွားနေမှု ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ပံ့ပိုးကူညီပေးဖို့ကို တောင်းဆိုတိုက်တွန်းသွားခဲ့ပါသည်…. (US ဒုဝန်ကြီးဆိုသူဟာ ဘိုင်ဒန်ကို မြန်မာစစ်သူပုန်တွေကို ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ လက်နက်တင်သွင်းဖို့ဆိုင်းငံ့ဖို့အရေးတွေကို ပြုလုပ်ဖို့ တိုက်တွန်းအကြံပေးခဲ့သူဟု သိရပါသည်)ဘိုင်ဒန်ကလည်း […]
Covid – 19 ရောဂါဟာ နိုင်ငံအနှံ့အပြားဖြစ်ပွားနေပြီး လူအသက်ပေါင်းများစွာကို သေကြေပျက်စီးနေစေတာကြောင့် ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအဖြစ် WHO က သတ်မှတ်ကြေညာထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာ နိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ တတိယလှိုင်းအဖြစ်… (ယူနီကုဒ် ဖြင့် ဖတ်မရသူများ အောက်တွင် ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့်ဖတ်ရန်)ဗီဒီယိုဖိုင် အောက်ဆုံးတွင်ပါသည်။ ဗီဇပြောင်းကိုဗစ်ရောဂါပြန့်ပွားမှုအပြင် ပြည်တွင်းရေးမငြိမ်သက်တာတွေကြောင့်လည်း ပြည်သူတွေဟာ အန္တ ရာယ်အခက်အခဲတွေကို အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလောအခြေအနေတွေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေနဲ့… ထိရောက်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ နည်းပါးနေတာကြောင့် ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာလည်း မိဘအုပ်ထိန်းသူမပါဘဲ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ Q ဝင်ဖို့ ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေကြရတာ တွေ့ရပါတယ်။မြို့နယ်တော်တော်များများမှာ တစ်စထက်တစ်စ… ပြန့်ပွားနေတဲ့ Covid 19 ကြောင့် လာရှိုးမြို့က အသက် (၆)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်လေးမှာလည်း ရောဂါကူးစက်ခံထားရပြီး တစ်ယောက် ကွာရန်တင်းဝင်ခဲ့ရတာကို စိတ်မကောင်းစွာ သိခဲ့ရပါတယ်။ကလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတော့ လာရှိုးမြို့ […]
နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဖြစ်တဲ့ ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာက ယနေ့ဆိုရင် (၇)ရက်တိတိပြည့်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်ရေမွန်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ (၂၅) ရက်နေ့မှာ မီးသင်္ဂြိုဟ်‌ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရေမွန်ကွယ်လွန်သွားတဲ့အပေါ်မှာ သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနေနဲ့ ယူကျုံးမရဖြစ်ရသလို ပရိသတ်တွေလည်း ထပ်တူထပ်မျှ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေမှာဆိုရင်လည်း ရေမွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှတ်တရတွေနဲ့ သူ့ရဲ့သီချင်းတွေကို ပြည်သူတွေက သတိတရ မျှဝေနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေ့ရက်လည်နေ့မှာတော့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုက ရေမွန့်အတွက်ရည်စူးပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပြုလုပ်ပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ရေမွန်နဲ့ညီအစ်ကိုတွေလို ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်အုပ်စိုးခန့်ကလည်း ဒီနေ့မှာပဲ ရေမွန်တို့အိမ်ကိုသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အုပ်စိုးခန့်က သူ့ရင်ထဲကစကားတွေနဲ့ နှုတ်ဆက်ထားတဲ့စာလေးအပါအဝင် ပန်းစည်းတစ်စည်းကိုလည်း ရေမွန့်ရဲ့ဓာတ်ပုံဘေးမှာ ထားပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ။ […]
အနုပညာရှင်တွေ အများစုကတော့ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အတူ အပြည့်အဝရပ်တည်ခဲ့ကြပါတယ် သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်တွေ ကျော်ကြားမှုတွေကို မေ့ကာ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း လမ်းမပေါ်အထိ ထွက်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ ဒါ့အပြင် သူတို့ရဲ့အကောင့်တွေကနေလည်း အစွမ်းကုန်နေ့ရောညပါ soeak out တွေလည်း လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ဒါ့ကြာင့်လည်း ပုဒ်မ ၅၀၅(က) နဲ့ တရားစွဲဆိုခံရသူတွေ ရှိသလို တစ်ချို့ နာမည်ကြီး အနုပညာရှင်တွေဆို ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြပါတယ် ဒီမနက်အစောပိုင်းလောက်မှာတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအပြင် အခြား နိုင်ငံရေးသမားများကို လွှတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ် အားလုံးကလည်း ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေခဲ့ကြသလို တစ်ချို့ဆို လွှတ်ပေးမယ့် နာမည်စာရင်းတွေပါ ကြိုသိနေကြသလို ပိုတောင် ရင်ခုန်နေကြတာတွေရှိနေပါတယ် အခုလည်း တစ်မနက်လုံး အားလုံး မျှော်လင့် […]
ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မထင်ထားလောက်အောင်ကို ထိရောက်နေတဲ့ အာတာလွတ်ဥ မကြာခဏစား ဖြစ်တယ် တန်ဆေးပဲ ဘယ်ဟာနေနေ အထိုက်အသင့် စားရမယ် ယူဆ ပါတယ် အာတာလွတ်ဥဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုရင် ဈေးလည်း သက်သာပြီး လူကြိုက်များတဲ့ သွားရေစာဖြစ် ပါတယ် ကလေးလူကြီး မရွေး စားသုံးနိုင်တဲ့ အာတာလွတ်ဥ ဟာဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရှိပါ တယ် ဒီစာလေးကို ဖတ်ပြီး မကြာခဏစားဖြစ်အောင် စားလိုက်ပါ ၁= နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်စေတယ် အာတာလွတ်ဥဟာ မဂ္ဂနီဆီယမ်ပါဝင်မှုမြင့်မားတာကြောင့် နှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေနိုင် ပါတယ်။ အိပ်မပျော်တာ၊ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်မပျော်တာတွေအားလုံးကို ဖြေရှင်းပေးနိုင် ပါတယ်။ ၂= သွေးအားကို ထိန်းညှိပေးတယ် အာတာလွတ်ဥမှာ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ ဆိုဒီယမ် ပါဝင်မှု များတာကြောင့် သွေးအားကို […]
ဒန့်သလွန်လက်တစ်ဆုပ်နဲ့ ရောဂါအမျိုးသုံးဆယ် ကျွန်တော်ကတစ်ပတ်ကိုဒန့်သလွန်ရွက်လက်တစ်ဆုပ်စီကို၂ခါလောက်စားဖြစ်ပါတယ် ဒီနေ့ဒန့်သလွန်ရွက်လက်တစ်ဆုပ်ကြော်စားရင်းနဲ့အမျိုးတွေကိုလည်းသတိရပြီးမျှဝေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒန့့်သလွန်ရွက်ရဲ့အံ့သြဘွယ်ရာကောင်းကျိုးတွေန်းစီပြီးပြောပြပါမယ် ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကနို့ကောင်းကောင်းမထွက်တဲ့ကလေးမိခင်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ဖူးပါတယ် အဲဒီကလေးအမေဟာဒန့်သလွန်ရွက်ဟင်းချိုသောက်ပြီးနောက်မှာအဖြူရောင်နို့ရည်တွေပန်းပြီးထွက်လာတာကိုအံ့သြစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ် ရန်ကုန်မြို့၊ရွှေဘုံသာလမ်းကသူဌေးကြီးတစ်ယောက်ဆိုရင်သွေးတိုးဆီးချိုအကြီးအကျယ်ဖြစ်တာ။သွေးက၁၈ဝလောက်တက်တယ် ဆီးချိုက၄ဝဝလောက်တက်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်သက်ဆိုးရှည်နိုင်ပါ့မလဲ သို့သော်ဒန့်သလွန်ရွက်ကိုထောင်းပြီးသောက်လိုက်တော့သွေးတိုးရောဆီးချိုပါပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုအံ့သြစွာတွေ့ခဲ့ရပါတယ် အခုဆိုရင်အသက်၉ဝနီးပါးရှိနေပါပြီ၊ကျန်းမာဆဲပါပဲ တောရွာတွေမှာဆောင်းတွင်းမိုးတွင်းဆိုရင်ကလေးလူကြီးအများစုနှာစေးနှာမွှန်အအေးမိကြလေ့ရှိတယ် ဟတ်ချိုးဆိုတဲ့အသံဟာရွာလုံးကျွတ်ပဲ ဒန့်သလွန်ဟင်းခါးပူပူလေးတွေပေးသောက်လိုက်တော့အချိန်တိအတွင်းမှာပျောက်ကင်းသွားကြတယ် ရေရှားတဲ့တောရွာလေးတစ်ခုကိုရောက်စဉ်ကလည်းအဲဒီရွာကရေတွေကနောက်လွန်းတဲ့အတွက်သောက်လို့မရပါဘူး ဒါပေမဲ့ဒန့်သလွန်စေ့ကိုအမှုန့်ထောင်းပြီးခပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရေကြည်ရေသန့်ကိုရပါတယ်။အံ့သြစရာကြီးပါ အဲဒီတောရွာကလူတွေပြောပြချက်အရဒန့်သလွန်ပင်ဟာဘယ်လောက်အံ့သြစရာကောင်းလဲဆိုရင်အပင်ကိုဘယ်လိုသတ်သတ်မသေပါဘူးတဲ့ သူ့အစေးနဲ့သူပြန်လည်ပတ်ဖွဲ့ပြီးအပင်ပြန်လည်ရှင်သန်အောင်သူ့ဟာသူပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအံ့သြဘွယ်ရာကြားသိခဲ့ရပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာဒန့်သလွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ကင်ဆာရောဂါကိုပျောက်ကင်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအနောက်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေသိရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ် ကင်ဆာကိုတောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒန့်သလွန်ကိုသေချာသုတေသနပြုကြပါတယ် သူတို့ရဲ့လေ့လာချက်တွေအရဒန့်သလွန်မှာလူ့အကျိုးပြုဗီတာမင်တွေသတ္တုဓာတ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီးအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပေးစွမ်းပါတယ် ၁=စိတ်ကြည်လင်လန်းဆန်းစေခြင်း ၂=သွေးတိုးကိုချပေးနိုင်ခြင်း ၃=ကင်ဆာအဖုအကျိတ်များကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း ၄=အနုဇီဝပိုးများကိုဆန့်ကျင်ခြင်း ၅=နှလုံးသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်း ၆=သွေးအားကောင်းခြင်း ၇=အင်စူလင်ကဲ့သို့အာနိသင်ရှိခြင်း ၈=အဆီချပေးခြင်း ၉=ရောင်ကိုင်းခြင်းကိုလျှော့ချပေးခြင်း ၁၀=အင်နာဂျီတိုးတက်စေခြင်း ၁၁=ကော်လက်စတြောချပေးခြင်း ၁၂=ကိုယ်တွင်းကိုယ်ပဒဏ်ရာများကိုပျောက်စေခြင်း ၁၃=ကိုယ်တွင်းအဆိပ်များကိုထုတ်ပေးခြင်း ၁၄=နှာစေးနှာမွှန်ခြင်းကိုပျောက်စေခြင်း ၁၅=ဂေါက်ရောဂါကိုသက်သာစေခြင်း ၁၆=ကလီစာလုပ်ငန်းများကိုကူညီခြင်း ၁၇=အဆိပ်အတောက်ပြေခြင်း ၁၈=ဆီးချိုချပေးခြင်း ၁၉=ဆံပင်သန်စေခြင်း ၂၀=ဖက်ခွက်နာပြည်တည်နာကိုပျောက်စေခြင်း ၂၁=အသားပိုမထွက်အောင်တားဆီးခြင်း ၂၂=ကာမအားတိုးပွားစေခြင်း ၂၃=ကိုယ်ခံအားတက်ခြင်း ၂၄=မျက်စိအမြင်ကြည်လင်စေခြင်း ၂၅=စိတ်ကျရောဂါကာကွယ်ပေးခြင်း ၂၆=အသားရေလှပခြင်း ၂၇=ခံနိုင်ရည်အားကောင်းခြင်း ၂၈=အဆစ်အမျက်နာကျင်မှုကိုသက်သာစေခြင်း ၂၉=မှိုရောဂါကိုဖယ်ရှားပေးခြင်း ၃၀=အင်တီအောက်ဆီ့ဒင့်ကြွယ်ဝခြင်းစသည်ဖြင့်ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲလောက်ဆိုရင်တော့ဒန့်သလွန်ရွက်ကိုစားဖို့သင့်ပြီပေါ့။နိုင်ငံတကာမှာဒန့်သလွန်ဆေးတွေကစျေးသိပ်ကြီးပါတယ် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့နေရာအနှံ့တွေ့ရပါတယ်။မြေရှိသူများအပင်စိုက်ထားဖို့ကောင်းပါတယ် ပေါများစွာရနေတဲ့အတွက်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်စားပေးကြပါ။အများကြီးစားစရာမလိုပါဘူးတစ်ခါစားရင်လက်တစ်ဆုပ်လောက်ပါပဲ စားတာကတော့လက်တစ်ဆုပ်ဆိုပေမဲ့ရရှိမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့မရေတွက်နိုင်အောင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ ချစ်ခင်လေးစားလျှက် […]
လူသိနည်းတဲ့ အပြုံး(၇)မျိုးအကြောင်း အပြုံး(၇)မျိုး ၁= မတရားသဖြင့် ခံရတဲ့အခါ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပြုံးပါ။ ဒါဟာ သဘောထားကြီးခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၂= နစ်နာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ဆန္ဒရှိရှိ ပြုံးပါ။ ဒါဟာ လူတွေကို ခွင့်လွတ်နားလည်ခြင်းတစ်မျိုးပာတဲ့။ ၃= ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ခပ်ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးပါ။ ဒါဟာ ထက်မြက်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၄= အကူညီမဲ့တဲ့အခါ ခပ်ပွင့်ပွင့်လေး ပြုံးပါ။ ဒါဟာ စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၅= ဘေးဒုက္ခကြုံတဲ့အခါ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ပြုံးပါ။ ဒါဟာ စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၆= အပြစ်တင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေး ပြုံးပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၇= အသဲကွဲတဲ့အခါ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေး ပြုံးပါ။ ဒါဟာ တင်းမာမှုကင်းတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ crd လူသိနည်းတဲ့ […]
ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ
ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ မိန်းခလေးတွေ သေချာဖတ် ဒီခေတ်မှာ မိန်းခလေးတစ်ယောက် မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ အချစ်ခံရဖို့ဆိုတာ ရှားသွားပြီ မခူးရက်တဲ့ ပန်းလေးတစ်ပွင့်ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ထိုင်ကြည့်နေသလို မြတ်နိုးမှုမျိုးနဲ့ ချစ်ဖို့ဆိုတာ ဟာသတစ်ပုဒ်လိုတောင် ဖြစ်နေပြီ ရည်းစားထားတာ အလှထိုင်ကြည့်ပြီး ဘာလုပ်ရမှာလဲ ကိုယ်မစားလည်း သူများစားမှာပဲ ဆိုတာတွေကပါသေးတယ် သူများသုံးပြီးသား ညစ်နွမ်းနေတဲ့ ပုဝါလိုမျိုး အရင်လူနဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခဲ့တာကို တန်ဖိုးကြီး ပစ္စည်းလို တန်ဖိုးထားနေလည်း အလကားပဲဆိုတဲ့ လူတွေနဲ့ ဒီလိုခေတ်ထဲမှာ မိန်းမဖြစ်ရတာ လူသုံးကုန် ပစ္စည်းတစ်ခုလိုပဲ ပိုက်ဆံတတ်နိုင်တဲ့သူတွေက သူတို့လိုအပ္တာကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်တယ် တမင်ယုတ်မာတဲ့သူတွေက အချစ်ဆိုတာကို အသုံးချပြီး ကိုယ်လိုချင်တာကို ရအောင်ယူတယ် ကတိတွေပေးတယ် မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးတယ်၊ တစ်ဖက်မိန်းကလေးရဲ့ အနာဂတ်တွေကို အိပ်မက်တွေပေးပြီး စိတ်ကြိုက်ခြယ်လှယ်နေတာ […]
တရားစွဲခံထားရတဲ့ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဝရမ်းပြုတ်သွားတဲ့ ညီမဖြစ်သူ မအေးသောင်းအတွက် ဝမ်းသားပီတိဖြစ်ရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နှင်းဝတ်ရည်သောင်း..
အေးသောင်းလို့ အများက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချော အေးဝတ်ရည်သောင်းကတော့ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲကြီးမှာ ပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တာကြောင့် ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခြင်းခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲက တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ဇွန်လ(၂၉)ရက်နေ့ညမှာတော့ ပုဒ်မ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့်တရားစွဲခံထားရတဲ့ အနုပညာရှင်(၂၄)ယောက်ကို အမှုပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်တဲ့အကြောင်း စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းဌာနတွေက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအထဲမှာ မအေးသောင် းကလည်း ပါဝင်လာပါတယ်..။ အဆိုပါသတင်းကြောင့် ကာယကံရှင်မိသားစုဝင်တွေအပြင် ပြည်သူပရိသတ်တွေကပါ ဝမ်းသာနေကြပြီး ညီမဖြစ်သူ မအေးသောင်းအတွက် နှင်းဝတ်ရည်သောင်းကလည်း ဝမ်းသာနေရတဲ့အကြောင်း စာလေးရေးကာ ပြောပြလာပါတယ်..။“I am so happy finally she is home . Home time baby. Home time .love you su […]